Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » UMboniso omtsha waseBeijing utyhila impucuko yaBantu
Itotali yemiboniso ephantse ibe yi-200 iboniswe kumboniso, enesihloko esithi Ilayisi, imvelaphi, ukuKhanya: uMboniso oKhethekileyo we-Shangshan Culture Archaeological Discoveries eZhejiang, ukubonisa ixabiso kunye nokubaluleka koluntu lokulima irayisi elimelwe yinkcubeko yaseShangshan kwimpucuko yaseTshayina, kunye negalelo layo kunye nefuthe kwi-East Asia kunye nehlabathi.
Imiboniso yayiquka ukutya okuziinkozo zerayisi ekharbhoni eyaqala kwiminyaka eyi-10,000 eyadlulayo, amaqhekeza ezinto ezenziwe ngodongwe ezipeyintiweyo, amatye okusila namatye okulala, kwakunye neengqayi ezintle zomdongwe neekomityi ezavunjululwayo. Babonisa uphuhliso lwentlalo, uqoqosho, kunye nenkcubeko xa ukulima kwerayisi kwakusanda kuqala, kunye nendlela iindawo zokuhlala zaseTshayina ezaziphila kwaye ziqhuba imveliso yentlalontle kwiintsuku zokuqala.
Isemina ngempucuko yaseTshayina kunye neZhejiang nayo yabanjwa kwiMyuziyam yeSizwe yaseTshayina njengenxalenye ebalulekileyo yalo mboniso. Yadityaniswa nabembi bezinto zakudala abadumileyo abavela eTshayina nakwamanye amazwe. Iingxoxo zabanjwa ngexabiso lenkcubeko yaseShangshan kwimbali nakwimihla yangoku, kunye nesikhundla senkcubeko kwinkcubeko yamaTshayina kunye nempucuko yabantu.
Kwisemina, uNjingalwazi uDorian Q Fuller ovela kwiYunivesithi yaseLondon yaseLondon Institute of Archaeology wazisa, ngokwembono yehlabathi, ixabiso lenkcubeko yaseShangshan kunye negalelo layo kwinguqu ye-Neolithic. U-Li Liu, unjingalwazi kwiZiko le-Archaeology laseStanford, kwiYunivesithi yaseStanford wacacisa ngenkcubeko yaseShangshan kunye nemvelaphi yewayini efumaneka kwiinkozo.
Ifumaneka kumbindi nasezantsi woMlambo iYangtze eTshayina, isiza saseShangshan ukuza kuthi ga ngoku sesona siseko saziwayo sokulima irayisi ehlabathini. Njengemvelaphi yokulima irayisi, inkcubeko yaseShangshan ikwindawo ebalulekileyo ekusekweni kwempucuko yaseTshayina.